US'il Vous Plaît et Merci
ULwesihlanu, May 21, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukube ubunganakile okwamanje, bengingenile ngaphakathi Paris ukusebenza nefemu. Kube wuhambo lwesivunguvungu futhi empeleni sibuyela emuva namuhla (kungu-6: 30 ekuseni lapha). Ukuholela ohambweni, bengizothanda ukuthi ngishaye isiFulentshi sami ngakho angizwakalanga njengomuntu waseMelika onganalwazi kangako. Ngenhlanhla, cishe wonke umuntu esihlangane naye lapha ukhuluma kahle isiNgisi.
Sikhulume nomuntu esisebenza naye izolo, wasitshela ukuthi empeleni kunamagama amabili kuphela odinga ukuwazi eParis ukuze ungathuki abantu bendawo ngokucabanga ukuthi bayakhuluma ulimi lwakho… Lokho ngiyabonga (ngiyabonga) futhi Ngiyacela (s'il vous plaît). Kungenze ngacabanga ngendlela esiphathana ngayo njengamabhizinisi. Ngoba ukukhokha kuvamise ukushintsha izandla, sivame ukukhohlwa ukuthi ngiyacela noma siyabonga
Othile ungitshele kanye ukuthi akusiyo inhloso yesisebenzi noma umthengisi ukwenza 'ezimbi umsebenzi '. Noma kunamabhizinisi amaningi axhumana ngokungeyikho, aletha okuncane, noma angena ezindabeni zesikhathi… kungenzeka angalokothi okuhlosiwe ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela. Ngizosebenza ngokuzikhandla kancane ekubongeleni nangokucela ngenhlonipho imiphumela… Ngifuna ukusebenzisana nabantu abakuqondayo ukuthi ibhizinisi liyibhizinisi kepha ukukhuthaza ubudlelwano obuqinile nokuba nenhlonipho kufanele kuhlale kuqala.
Ngiyabonga ngosizo lwakho kubhulogi. Okwami analytics angalokothi aqambe amanga futhi ngibonile ukuthi sihlehlise amasonto ambalwa edlule ngokukhula. Lokhu ikakhulukazi kuhambisana nokuvumelana kokuthunyelwe. Manje njengoba uhambo lwami luphelile futhi ukuhlelwa kokugcina ku- Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies kukhona, ngibheke phambili ekwenzeni ucwaningo olunzulu futhi ngikhulise ikhwalithi yokuthunyelwe kwebhulogi. Uma unemibuzo ongathanda siyiphendule, sicela usebenzise ifomu lethu leChaCha.me kubha eseceleni yekhasi lasekhaya ukuthumela umbuzo kithi.
Impendulo ye-Haptic: I-Evolution Yezikrini Zokuthinta